Ady amin’ny VIH/Sida, raboka, tazomoka: Nahazoan’i Madagasikara 380 188 987 dolara tao anatin’ny 15 taona
jeudi, 10 octobre 2019 12:27
Any Lyon, Frantsa mitarika delagasiona malagasy mandray anjara amin’ny andiany faha enina amin’ny Fihaonambe ho famerenana ny loharanon-karenan’ny petra-bola manerantany hiadiana amin’ny fihanaky ny VIH/Sida, ny raboka ary ny tazomoka, ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Hanentanana ireo mpamatsy vola sy ireo firenena misitraka io petra-bola io ho an’ny fe-potoana 2021-2023 ity fihaonambe ity. Tanjona ny hanangonana 14 miliara dolara ho an’ny telo taona ho avy, izay hahafahana mamonjy ain’olona 16 tapitrisa voan’ireo aretina ireo.
Tamin’ny taona 2003 i Madagasikara no nanomboka nisitraka io petra-bola io ary 380 188 987 dolara ny famatsiam-bola azoantsika hatramin’ity taona ity.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nanambaran'ny filoha Andry Rajoelina ireo paikady entiny hanatanterahana ny vinan'ny fahasalamana ho an'ny rehetra, izay laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana. Ao amin’ny pejy fesibokiny no nanambaran’i Andry Rajoelina fa « hatramin'ny nanombohako nitantana ny firenena Malagasy, ny volana janoary 2019 dia napetrako ho laharam-pahamehana ny fahasalamana ho an'ny rehetra. Adidiko ny miahy, miaro, mitondra fitsaboana mendrika sy mamonjy ny ain'ireo iray mpiray Tanindrazana ».